people Nepal » आजको राशिफल : मंसिर २० गते / डिसेम्बर ६ तारिख बुधबार आजको राशिफल : मंसिर २० गते / डिसेम्बर ६ तारिख बुधबार – people Nepal
आजको राशिफल : मंसिर २० गते / डिसेम्बर ६ तारिख बुधबार
Posted on December 6, 2017 December 6, 2017 by Purna Nanda Joshi
श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल मार्गशिर्ष २० गते बुधबार इश्वी सन २०१७ डिसेम्बर ६ तारीख पौष कृष्ण पक्ष तृतीया तिथी चन्द्रमा मिथुन राशिमा सुर्य दक्षीणायन हेमन्त ऋतु महाराज छत्रशाल धामागमन –
कार्यसम्पादनमा आटँ र शाहसको कमि महसुस हुनेछ । पुरानामित्रहरुको भेटघाटमा सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । कार्यसम्पादनमा भएको त्रुटिको अपसज आईपर्नेछ । बिश्वासनिय ब्यक्तिहरु बाट धोका हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । प्रतिद्वन्धिहरु सबल रहलान ।
नयाँ लगानिका क्षेत्रमा सजग रहनु होला । संचित रकम खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । खानपानको खराबिले स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न गराउन सक्नेछ । सामान्य कार्यसम्पादनमा अधिक श्रम खर्चनु पर्ने सम्भाबना रहेकोछ । सामान्य स्थानतरणको सम्भाबना रहेकोछ ।
चिसो सम्बन्धी समस्याका कारण स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । नयाँकार्यको थालनिको योग रहेकोछ । दाम्पत्य सम्वन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । शारिरिक आलस्यता ले सताउने छ ।
आम्दानिको तुलनामा खर्च बढ्नसक्ने सम्भाबना रहेको छ । मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । प्रतिस्प्रधामा उत्रन तपाईकोे समय ले त्यति साथ दिने छैन । शारिरीक आलस्ताले सताउन सक्छ । मान्यजनको साथसहयोग प्राप्त हुनेछ । सामान्य आर्थिक अभाबको सामन गर्नु पर्ला ।
सामान्य कार्यको लागि धेरै समय खर्चनु पर्नेछ । आम्दानिका बिभिन्न स्रोतहरु फेला पर्नेछन । ब्यापार ब्यवसायमा समय राम्रो रहेको छ । नयाँ कार्य क्षेत्रका लागी लगानि गर्ने समय रहेको छ । मित्रजनको सहयोग प्राप्त हुनेछ । सामान्य स्वास्थ सम्बन्धि समस्या रहला
सन्तान सम्बन्धि समस्या ले सताउन सक्छ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । भौतिक शुःख साधनको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुनेछ । पारीवार तथा ईष्टमित्र सगँको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।
धार्मिक क्षेत्रको यात्राको सम्भाबना रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । दाजु भाई तथा इष्ट मित्र बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । आफन्त जन बिच भेटघाट हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । पराक्रममा बृद्धि हुनेछ ।
दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार रहनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याको कारण मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । नजिकका ब्यक्ति बाट बिश्वासघात हुन सक्छ । खानपानको क्षेत्रमा सजग रहनु होला । बोलिको कारण साधारण समस्या आउन सक्नेछ ।
प्रेमी प्रेमीका बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नेछ । ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो आम्दानि हुने योग रहेको छ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । मित्रजनहरु बिचको भेटघाटले मन प्रशन्न रहने छ ।
मनको चन्चलताले कार्य क्षेत्रमा ब्यबधान प्राप्त हुने छ । सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । यात्रामा सामान्य कठिनाई आईपर्न सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा मित्रजनले प्राप्त गर्नेछन् । सहि निर्णय गर्न नसक्नाले सामान्य अप्जस सहनु पर्ला ।
मनोरञ्जन तथा भोगबिलासको क्षेत्रमा मन जानेछ । सन्तान शुःख प्राप्त हुनेछ । सामान्य चोटपटक सहनु पर्ला । नयाँ कामको थालनि गर्न राम्रो समय रहेको छ । बौधिक क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गर्ने छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा कमि आउनेछ ।
मान्यजनको साथ छुट्नाले सामान्य चिन्ता सहनु पर्नेछ । प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । आम्दानि हुने योग रहेको छ । कामको क्षेत्रमा समान्य ढिलाई रहन सक्छ । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । खानपानको क्षेत्रमा सजग रहनु होला ।